Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Magaalada Muqdisho | Dhacdo
Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Magaalada Muqdisho
Magaalada Muqdisho ayaa maanta illaa caawa waxaa ka dhacay iska horimaad dhowr goobood ku dhex maray Ciidamada Dowladda iyo xoogag kaloo taabacsan Midowga Musharaxiinta.
Iska horimaadka ayaa bilowday, ka dib markii maanta ay is rasaaseyn ka dhacday Isgoyska Sanca ee Waqooyiga Magaalada Muqdisho.
Iska horimaad kaloo hubeysan ayaa gelinkii dambe ee maanta ka dhacay aagga Isgoyska Marinaayada ee Degmada Cabdicasiis, halkaas oo uu ku yaalo hoyga Madaxweynihii hore ee dalka, Xasan Sheekh Maxamuud.
Dagaal culus ayaa caawa ka dhacay nawaaxiga Madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim Salaad Xasan ee Degmada Hodan, ka dib markii Ciidamada Dowladda ay weerareen hoyga Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaalkaasi leesku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, ka dib markii Ciidamada Dowladda ay weerareen hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Sidoo kale xoogag taabacsan Midowga Musharaxiinta ayaa caawa weeraray fariisimaha Ciidamada Dowladda ku leeyihiin Isgoyska Sayidka, oo laga ilaaliyo ammaanka Madaxtooyada.
Wararka ayaa intaa ku daraya in tiro madaafiic ahi lagu ekeeyay Xarunta Villa Somalia, qaarkoodna ay gudaha ugu dhaceen, inkastoo aan wax badan laga ogayn khasaaraha ka dhashay.
Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynihii hore ee Somaliya ayaa nasiib-darro ku tilmaamay in ciidan ka amar qaata Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay soo weeraraan hoygiisa.
“Waxaa nasiib-darro weyn ah in ciidan ka amar qaata Madaxweynihii hore ay weerar ku soo qaadaan hoygeyga. Waxaan horey uga digay, kuna celinayaa khatarta ay leedahay siyaasadeynta ammaanka. Masuuliyadda dhibaatada ka dhalata arrinkan waxaa qaadaya Farmaajo.” Ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Wasiirka Amniga, Xasan Xundubey Jimcaale oo hadlayna waxaa uu beeniyay in Ciidamada Dowladdu weerareen hoyga Xasan Sheekh Maxamuud.
Wasiir Xundubey oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaase sheegay in Ciidamada Dowladda ay dagaal la galeen maleeshiyaad uu sheegay in la soo khalday, dibna ay magaalada uga saareen, sida uu yiri.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya in uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh oo dagaalka ka dhashay, balse aan faah faahin laga lahayn inta uu khasaaruhu le’egyahay.
Dagaalka ayaa imaanaya, iyadoo marar badan laga digay khatarta amni ee ka dhalan karta muddo kordhinta Madaxtooyada iyo Baarlamaanka.